မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းတချို့ဆိုတာ ...! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းတချို့ဆိုတာ ...!
မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းတချို့ဆိုတာ ...!
Apann Pyay 10:30 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
ယောက်ျားလေးတွေက ရည်းစားသက်တမ်း နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့ ပျင်းလာတယ်။ ပျင်းတာနဲ့အမျှ မိန်းကလေးတွေကို လှည့်စားလာကြတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိမှာပါ။ ဒါမဲ့ တချို့ကောင်လေးတွေကတော့ တကယ်ချစ်ရင် သူတို့မဖောက်ပြန်မိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းကြတယ်။
တချို့အချက်လေးတွေသူတို့ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို အတိအကျပြောပြနေတယ်။
၁. သူ သင့်ကိုဆို အမြဲရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံတယ်။
ကိစ္စ သေးသေး ကြီးကြီး အကုန်လုံးရိုးရိုးသားသား ဖွင့်ပြောပြတယ်။ သူခံစားချက်တွေကို အမှန်အတိုင်းပြောပြရလို့လည်း သူရှက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။
သင် သူ့ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုတာကို သူသိထားတယ်လေ။
၂. သင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတယ်။
သင် သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကို သိဖို့ဖုန်းဆက်စရာမလိုဘူး။ သူကဘဲ အမြဲဘယ်ရောက်နေတယ်၊ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားနေမှာ။
ဆိုတော့ သူဖောက်ပြန်ဖို့စဉ်းစားဖို့နေနေသာသာ သူ့ခေါင်းထဲယောင်လို့တောင် တွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး။
၄. အရင်ရည်းစားတွေနဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်။
ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများက အရင်ရည်းစားတွေနဲ့ ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သူ သူ့ရည်းစားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုံးဝဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင် သင် စတ်ပူဖို့မလိုတော့ဘူး။
၅. သူရဲ့ လိုအပ်ချက်ထက် သင့်လိုအပ်ချက်ကို အရင်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။
သူသာဖောက်ပြန်လိုက်ရင် သင်ဘယ်လောက်နာကျင်ခံစားရမယ်ဆိုတာ သိတော့ သူဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်မိအောင်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မယ်။ သင် ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စသေးသေးမွှားမွှားတောင် လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ယောကျြားလေးတှကေ ရညျးစားသကျတနျးနညျးနညျးကွာလာတာနဲ့ ပငျြးလာတယျ။ ပငျြးတာနဲ့အမြှ မိနျးကလေးတှကေို လှညျ့စားလာကွတယျဆိုတာ လူတိုငျးသိမှာပါ။ ဒါမဲ့ တခြို့ကောငျလေးတှကေတော့ တကယျခဈြရငျ သူတို့မဖောကျပွနျမိအောငျ အတတျနိုငျဆုံးထိနျးကွတယျ။
တခြို့အခကျြလေးတှသေူတို့ဖောကျပွနျမှာ မဟုတျတဲ့အကွောငျးကို အတိအကပြွောပွနတေယျ။
၁. သူ သငျ့ကိုဆို အမွဲရိုးရိုးသားသားဆကျဆံတယျ။
ကိစ်စ သေးသေး ကွီးကွီး အကုနျလုံးရိုးရိုးသားသား ဖှငျ့ပွောပွတယျ။ သူခံစားခကျြတှကေို အမှနျအတိုငျးပွောပွရလို့လညျး သူရှကျနမှော မဟုတျဘူး။
သငျ သူ့ကိုဘာဖွဈဖွဈလကျခံမယျဆိုတာကို သူသိထားတယျလေ။
၂. သငျနဲ့ အဆကျအသှယျရဖို့ အမွဲကွိုးစားနတေယျ။
သငျ သူဘယျရောကျနလေဲဆိုတာကို သိဖို့ဖုနျးဆကျစရာမလိုဘူး။ သူကဘဲ အမွဲဘယျရောကျနတေယျ၊ ဘာလုပျနတေယျဆိုတာကို ဖုနျးဆကျပွီး အကွောငျးကွားနမှော။
ဆိုတော့ သူဖောကျပွနျဖို့စဉျးစားဖို့နနေသောသာ သူ့ခေါငျးထဲယောငျလို့တောငျ တှေးမိမှာမဟုတျဘူး။
၄. အရငျရညျးစားတှနေဲ့ လုံးဝအဆကျအသှယျဖွတျပလိုကျတယျ။
ယောကျြားလေးတှတေျောတျောမြားမြားက အရငျရညျးစားတှနေဲ့ ပွနျပွီးဖောကျပွနျတတျလရှေိ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ သူ့ရညျးစားတှနေဲ့ အဆကျအသှယျလုံးဝဖွတျထားတယျဆိုရငျ သငျ စတျပူဖို့မလိုတော့ဘူး။
၅. သူရဲ့ လိုအပျခကျြထကျ သငျ့လိုအပျခကျြကို အရငျဖွညျ့ဆညျးပေးတယျ။
သူသာဖောကျပွနျလိုကျရငျ သငျဘယျလောကျနာကငျြခံစားရမယျဆိုတာ သိတော့ သူဘယျတော့မှ မဖောကျပွနျမိအောငျထိနျးသိမျးလိမျ့မယျ။ သငျ ခေါငျးကိုကျစရာကိစ်စသေးသေးမှားမှားတောငျ လုပျမှာမဟုတျဘူး။